Iindlela ezi-5 zoNxibelelwano noLuntu abaSebenzi bokuPhucula iiPaki zabo | Martech Zone
Ukwenza ubuqu kunyuse amaqondo okuguqula. Asiyongcamango leyo, ukusebenza komntu ibonakalisiwe iphindaphindwe. Ukuba uyingcali kwezonxibelelwano esidlangalaleni, uguquko lwakho kukukwazi kwakho ukupapasha okanye ukuphembelela ukwabelana ngebali lomthengi wakho okanye umsitho. Kusengqiqweni kuphela ukuba ukwenziwa komntu kuncedise ukuba utshintsho, ukanti iingcali ziyaqhubeka nokutshabalalisa ubudlelwane bazo (khumbula… yiyo i-R kwi-PR) kunye neenkqubo zebatch kunye ne-blast system kunye neetekhnoloji.
Sibhalile kwaye sabelane Uyifaka njani ibhlog ngaphambili. Siye sabelana UNGAYENZI njani into yokufaka iblogger. Kwaye apha endleleni, sabelane ngezixhobo zokufikelela kunceda abaqeqeshi bezoBudlelwane baLuntu ukugcina oonxibelelwano kunye nokwenza umsebenzi ongcono wokwakha ubudlelwane kunye nabo. Inqaku: Ayiyakhi i-imeyile e-cheesy evula ukuba ubusoloko ungumlandeli wexesha elide, othe wafunda nje ____, kwaye ungathanda ukwabelana ngolwazi malunga nomthengi wakho. #ywn
New uphando oluvela kuCision ikhombe iindawo apho iingcali zonxibelelwano noluntu kufuneka uphucule ku:
I-79% yabaphembeleli bafuna ukuba iingcali ze-PR zilungelelanise iindawo ezifanelekileyo ezifanelekileyo zokugubungela
I-77% yabaphembeleli bafuna ukuba iingcali ze-PR zikuqonde ngcono ukuphuma kwazo.
I-42% yabaphembeleli bafuna ukuba iingcali ze-PR zibonelele ngolwazi kunye nezixhobo zeengcali.
I-35% yabaphembeleli bafuna ukuba iingcali ze-PR zihloniphe ukhetho lwazo, apho i-93% ikhetha i-imeyile.
Mhlawumbi ebaluleke kakhulu kukuba i-54% yeentatheli zilandela ibali elibekiweyo ngenxa yeenkcukacha ezibandakanyiweyo kwimveliso, umsitho okanye iinkcukacha zesihloko. Imicimbi esemgangathweni! Umthetho endikruqulwe yiyo kuphela yingxelo iphela kukuba ukukhutshwa kweendaba kusathathwa njengokubalulekileyo kwiintatheli. Ndicinga ukuba yile
Funda i-State of Media 2016 kwi-Cision
Similiselwa yonke imini Martech Zone kwaye ndineqaqobana leengcali ze-PR ezihlala zinendlebe kuba bayahlonipha ixesha lam xa bebeka ibali. Umthetho endikruqulwe yiyo kuphela yingxelo iphela kukuba ukukhutshwa kweendaba kusathathwa njengokubalulekileyo kwiintatheli. Ndicinga ukuba yinkcazo engacacanga leyo. Andikhathali nokuba yinto epapashiweyo okanye ibali elibhalwe kakuhle… kodwa andikhangeli kukhutshwa kweendaba kwaye andikhange ndibenalo ixesha elide.
tags: 2016ulungelelwanisokwi-infographiciipakiukutsibaprEyobudlelwane boluntuiindawo zolwalamano zoluntuimeko yeendaba
I-CX xa ithelekiswa ne-UX: Umahluko phakathi koMthengi kunye noMsebenzisi